Kintana sivy rantsana ahitana ny soratra izay azo vakina hoe "Yā Bahāʾ al-Abhā" izay midika hoe "Ry Voninahitry ny Be voninahitra indrindra!"
Ny Bahaisma na Baha'isma na Finoana baha'i na Finoana bahay dia finoana abrahamika mahaleo tena nentin' ny irak' Andriamanitra iray antsoina hoe Baha'u'llah. Fivavahana monoteista ny finoana bahay. Baha'i na Bahay no iantsoana ireo mpanara-dia ity finoana ity. Mandala ny maha tokana an' Andriamanitra ny Baha'i. fivavahana abrahamika mitory ny maha iray ara-panahy ny olombelona rehetra ny finoana bahay. Ny mpino bahay dia milaza ny tenany ho mpikambana amina "fivavahana mahaleo tena" .
Ilay Persana atao hoe Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī (1817-1892), izay atao hoe Baha'u'llah taty aoriana, no nanorina ny finoana bahay tamin' ny taona 1863. Ny anarana hoe Baha'u'llah dia midika hoe "Voninahitr' Andriamanitra" izay atao amin' ny teny arabo mitovy dika amin' io hoe Bahāʾ-Allāh. Mpianatr' i Bahāʾ-Allāh ny mpino bahay. Ny finoana bahay dia manana foibentoerana mihoatra ny 100 000 eran-tany ka ao Haifa any Israely no foibeny fara tampony. Tamin' ny taona 2011 dia niisa 7 000 000 any ho any ny mpino bahay izay avy amin' ny vahoaka na foko 2 100 samihafa miparitaka amin' ny firenena 189 . Ny ivontoerana ara-panahy, izay nanaovana fivahiniana masina (ziyarat) sady ivontoeran' ny fitantanan-draharaha dia ao Haifa sy ao Acra any Israely.
1 Tantaran' ny finoana bahay
2 Finoan' ny Bahay
2.1 Ny amin' Andriamanitra
2.2 Ny amin' ny fivavahana
3.1 Fivavahana iraniana
Tantaran' ny finoana bahay[hanova | hanova ny fango]
Manaraka ny fizotry ny tantaran' ireo mpitarika ara-panahy azy ny tantaran' ny finoana bahay, ka nanomboka tamin' ny takarivan' ny 22 Mey 1844 izany, araka ny fanapahan-kevitry ny Bāb tao Shiraz ao Iràna, sady miorina amin' ny fototra ara-pitantantanan-draharaha napetrak' ireo olo-malaza ara-tantaran' ilay finoana. Tao amin' ny fanjakana iraniana sy ôtômàna foana ny fikambanana bahay ka tsy niova izany raha tsy tamin' ny nahafatesan' i Bahāʾ-Allāh tamin' ny taona 1892. Nivoatra tao Eorôpa sy tany Amerika Avaratra ilay fivavahana tamin' ny andron' i ʿAbd-al-Bahāʾ zanak' i Bahāʾ-Allāh, ary nihamafy orina tao Iràna izay toerana mbola izakany fanenjehana mafy ankehitriny. Tamin' ny nahafatesan' i ʿAbd-al-Bahāʾ tamin' ny taona 1921 dia niditra tamin' ny dingana vaovao ny fitarihana ara-panahy ny fikambanana, ka nivoatra avy amin' ny fitarihan' olon-tokana ho amin' ny fandaminam-pandraharahana izay ahitana olom-boafidy sy olom-boatendry.
Tamin' ny fiantombohan' ireo taona 1790 tao Iràna dia teraka ny fikambanana shiita tia zava-miafina sy mihambo ho manam-pifandraisana mivantana amin' Andriamanitra notarihin' i Šayḫ Aḥmad Aḥsāʾī. Ny mpianany, atao hoe shaykhi, dia nanorina ny fampianarany tamin' ny lafiny metafizikan' ny shiisma sady nitsikera ny fiankinan' ny mpitondra fivavahana maro anisa tafahoatra amin' ny lalàna.
Tamin' ny nahafatesan' i Sayyid Kāẓim, mpandimby an' i Šayḫ Aḥmad tamin' ny fitantanana ny sekoly, dia lasa nitady mpampianatra hafa ny sasany tamin' ny mpianany mba hitantana ny fikambanana. Niainga ho any Shiraz ny iray amin' ireo mpianatra ireo, dia i Mullā Ḥusayn, taorin' ny efapolo andro nanaovana vavaka sy fifadian-kanina.
Noraisin' ny mponina izay nanasa azy hiantrano ao aminy i Mullā Ḥusayn tamin' ny 22 Mey 1844 rehefa tonga tany. Rehefa avy nanontany ny anton-dian' ny vahiny izany olona izany dia nilaza ny tenany ho ilay olona tadiavin' i Mullā Ḥusayn. I Sayyid ʿAlī Muḥammad Šīrāzī dia mpivarotra tao Shiraz izay 25 taona ka nilaza ny tenany fa ny fisehoana vaovaon' Andriamanitra sady ilay Mahdi nandrasana hatrizay (na Qāʾim).
Nitondra ny anaram-boninahitra hoe Bāb (باب ), izay midika hoe "varavarana" izy (izany hoe varavarana idirana mankany amin' ny fahamarinana), ary notifirin' ny manampahefana tao Iràna ka maty, araka ny fitakian' ireo mpitondra fivavahana shiita, enin-taona taty aoriana tao Tabriz.
I Mullā Ḥusayn no mpianatry ny Bāb voalohany. Tao anaty fotoana fohy dia niampy fito ambin' ny folo izany (ka ny iray aminy dia vehivavy atao hoe Tahira). Treraka tamin' izany fotoana izany ny babisma. Ireo mpianatra valo ambin' ny folo volohany ireo no fantatra hatrami' izay ao amin' ny babisma hoe "Taratasin' ilay Velona" na "Soratr' ilay Velona". Ny votoatin' ny hafatry ny Bāb dia ny fahantomotry ny fahatongavan' "Ilay hahariharin' Andriamanitra" (man yuẓhiruh Allāh), ilay nampanantenaina tao amin' ny fanambaràn' ireo fivavahana tany aloha. Isan' ny mpianatry ny Bāb i Bahāʾ-Allāh mpanorina ny finoana bahay ka nanambara ny tenany ho ny fahatanterahan' ny faminanian' ny Bāb.
Ny mpanorina ny finoana bahay, i Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī, dia teraka tao amin' ny faritanin' i Mazanderan any Iràna tamin' ny 12 Novambra 1817 tao amin' ny fianakavian' andriana iray. Niasa tao amin' ny governoran' ny shah ao Iràna ny rainy. Rehefa maty ny rainy dia saika hatao mpandimby azy ao amin' ny lapan' ny mpanjaka i Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī. Tsy nanaiky anefa izy mba hahafahany manokana ny fotoany amin' ny fanampiana ny olona ianjadian' ny tsindrihazolena sy ny marary ary ny mahantra, sady hiaro ny rariny. Nikambana tamin' ny babisma izy tamin' ny faha-30 taonany. Tamin' ny taona 1852 dia nosamborina izy sy nasesitany tany Bagdad izay niankina tamin' ny fanjakana ôtômàna.
Afaka 10 taona tany an-tsesitany tao Bagdad izy, tamin' ny faha-12 andron' ny fankalazana ny fetin' ny Riḍvān, izay nanomboka tamin' ny 22 Avrily hatramin' ny 03 Mey 1863, dia nilaza tamin' ny manodidina azy fa izy no ilay nambara fa ho tonga, araka ny filazàn' ny Bāb mialoha, dia ilay "fisehoana" fara tampon' Andriamanitra nadrasan' ireo fivavahana mônôteista sasany. Nanomboka nahangona mpianatra izy, sady nanana eritreritra ny hanorina fivavahana ho an' ny olona rehetra eran-tany, izay hisehon' ny fahatanterahana tongalafatra amin' ny fivavahana rehetra nisy hatramin' izay sady ho vatofehizoron' ny fanjakan' ny fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana sy ny fahafahana ary ny olombelona eto an-tany. Voatery nandao an' i Bagdad i Bahāʾ-Allāh ka nankany Kônstantinôpôly, avy eo nankany Edirne (any Torkia amin' izao) tamin' ny taona 1864 ary farany tany Acre (ao Israely amin' izao fotoana izao), avy eo tao amin' ny vilayet tao Damasy na Damaskosy (ao Siria akehitriny).
Nanao ny toriteniny tamin' ny alalan' ny fanoratana boky i Bahāʾ-Allāh ka ny tena manan-danja indrindra amin' izany dia nosoratany tao amin' ny fonjan' i Acre, dia ny Kitāb-i Aqdas ("Boky Masina indrindra"). Tao Edirne tamin' ny taona 1868 dia nandefa ny hafatra voasoratra ho an' ireo mpitondra malaza tamin' ny androny izy, isan' izany ny shah tao Iràna, ny tsar Alexadre II tao Rosia, ny mpanjakavavy Victoria tany Angletera, ny emperora Guillaume I, i Napoléon III ary ny papa Pio IX, izay namporisihiny hametra ny fitaovam-piadiany sy hanao izay hahatanteraka ny fandriam-pahalemana ho an' ny rehetra sady maharitra ary mahenika an' izao tontolo izao.
Ny maozôlean' i Bahāʾ-Allāh ao Acre.
Tany an-tsesitany sy tany am-ponja no nandanian' i Bahāʾ-Allāh ny efapolo taona farany niainany. Tamin' ny volana Aogositra 1868 hatramin' ny 1877 dia nohidiana tao amin' ny tanàna torka fanidiana voafonja tao Acre akaikin' i Haifa izy. Avy eo dia nonina tao ivelan' izany tanàna izany tany ambanivohitra izy, tao amin' ny trano antitra tao Bahjī, izay nahafatesany sy nandevanana azy tamin' ny 29 Mey 1892. Ao no toeran' ny qibla ho an' ny mpino bahay, toerana itodihan' ny Bahay rehefa manao ny vavaka tsy maintsy atao (ṣalāt).
Taorian' ny nahahatesan' i Bahāʾ-Allāh dia nafindra tamin' ny lahimatoany atao hoe ʿAbbās Effendi (1844-1921) ny fitantanana ny fikambanana bahay. Teraka tao Teheran i ʿAbbās Effendi ary nambara fa ʿAbd-al-Bahāʾ ("Andevo miasa ho an' ny famirapiratan' Andriamanitra").
Nomena ny anarana hoe "Ivon' ny Fanekem-pihavanana" sy "Lohan' ny Finoana" izy, afaka manazava ny hafatra nentin-drainy, izay nanendry azy ho hany tokana mpanazava manam-pahefana amin' ny asasorany.
Niaritra fanaovan-tsesitany sy famonjana tahaka an-drainy koa izy. Nogadraina izy ka tsy tapitra izany raha tsy tamin' ny taona 1908, fotoana nanafahan' ny Tanora-Torka azy. Avy eo dia nanorina ny renivohitry ny fikambanana bahay tao Haifa (ao Israely) izy araka ny toromariky ny rainy.
Nandao ny Tany Masina izy tamin' ny volana Aogositra 1911 dia nadeha tany Eorôpa ka nivahiny tao nandritra ny efa-bolana, indrindra tao Lôndra sy Parisy. Nihaona tamin' ny mpino bahay tandrefana izy ka nanao valandresaka momba ny finoana bahay sy ny foto-dalàny. Tamin' ny lohataona 1912 i ʿAbd-al-Bahāʾ dia nanao dia lava nandritra ny iray taona indray tany Eorôpa sy tany Etazonia ary tany Kanada. Nanampy azy amin' ny fampielezana ny finoana bahay tany Andrefana izany ka niteraka fandrosoana lehibe, indrindra tany India sy Etazonia ary Eorôpa.
Nodimandry tao Haifa i ʿAbd-al-Bahāʾ tamin' ny 28 Novambra 1921, taorian' ny nanendreny ny zafikeliny, dia i Shoghi Effendi (1897-1957), ho mpandimby azy eo amin' ny asan' ny Mpiambina ny finoana bahay. Nalevina tao aminy maozôlean' ny Bāb eo amin' ny tendrombohitra Karmela (Carmel) ao Haifa izy ka ao hatraminizao, mandra-panamboarana ny maozôlea natokana ho azy.
Ny zafikeliny, Shoghi Effendi Rabbānī (1897-1957), no nandimby an' i ʿAbd-al-Bahāʾ tamin' ny fitarihana ny fikambanana bahay. Nateraky ny vavimatoan' i ʿAbd-al-Bahāʾ izy ary nomena ny anaram-boninahitra hoe Walīy-i amr Allāh ("Mpiambina ny raharahan' Andriamanitra). Nobeazina tany Oxford izy ka afaka nandika amin' ny teny anglisy ny asasoratra manan-danja indrindra ao amin' ny finoana bahay sady nampivoatra ny Lamim-pandraharahana bahay.
Noho ny fanetsehany sy ny fitarihany nampian' ireo mpianatra sangany mitondra ny anarana hoe "Tanan' ny Raharahan' Andriamanitra", dia nanomboka ny "Kroazady folo taona" (ǧihād) tamin' ny taona 1953 ka tsy nifarana raha tsy tamin' ny taona 1963. Izany "Kroazady" izany dia nahatonga ny finoana bahay niely amin' ny firenena manerana an' izao tontolo izao. Teo anelanelan' ny fanendrena azy tamin' ny taona 1921 sy ny nahafatesany tamin' ny taona 1957 dia 100 000 tonga 400 000 any ho any ny isan' ny mpino bahay, ary ny firenena nisy azy ireo dia 35 tonga 250 any ho any. Nahatsangana Antenimieram-pirenena ara-panahy enina vaovao izy, izay nanovona ireo efa nisy tao Iràna sy tao Etazonia.
Taorian' ny nahafatesany tampoka tamin' ny 4 Novambra 1957, tao anaty toe-javatra tsy nahafahana nanendry ny ho mpandimby azy, dia fitarihana iombonana nahitana olona sivy voafidy tamin' ireo "Tanan' ny Raharaha" no nandray an-tanana ny fitondrana ny fikambanana mandra-pahatongan' ny taona 1963 nifidiana ny Tranon' ny FahamaIinana ho an' Izao Tontolo Izao izay tsy inona fa Filankevitra faratampon' ny fikambanana natao hisahana ny fitantanan-draharaha fa tsy natao ho mpitondra fivavahana.
Ny tahirin-kevitra fototra ho an' ny fitantanan-draharaha bahay dia ny Kitāb-i Aqdas nosoratan' i Bahāʾ-Allāh sy Ny Sitrapo sy ny Didimiafin' i ʿAbd-al-Bahāʾ. Nanangana ny Tranon' ny Fahamarina ho an' Izao Tontolo Izao, izay ahitana mpikambana voafidy, i Bahāʾ-Allāh. I Abd-al-Bahāʾ kosa nanangana ny foto-dalàna mifehy ny "Fiambenana" ifandovana sady namaritra ny fifandraisana misy eo amin' ireo andrim-pitantanana roa ireo. Ao amin' io didy miafina io i ʿAbd-al-Bahāʾ dia nanendry ny lahimatoa amin' ireo zafikeliny, izay tsy iza fa i Shoghi Effendi, ho lasa "Mpiambina ny Raharahan' Andriamanitra", izay angady nananana sy vy nahitana ny fampandrosoana izany fitantanan-draharaha izany.
Izany Lamim-pitantanan-draharaha bahay izany dia ahitana mpikambana voafidy sy mpikambana voatendry. Isan-toerana na isam-patritra na isam-pirenena dia mifidy ireo mpikambana sivy ao amin' ny antenimiera ara-panahy isan-taona ny mpino bahay mba hisahana ny raharahan' ny fikambanana isan' ambaratonga izay manaja ny fameram-pahefana misy ambaratonga. Tsy fidina ny mpikambana ao amin' ny "Fikambanan' ny Mpanolotsaina" (hayʾāt-i mušāwirīn) fa tendrena isan' ambaratonga isan-toerana sy eo amin' ny ambaratonga iraisam-pirenena, ka izy ireo no miantoka ny fampielezana sy ny fiarovana ny fikambanana (izany hoe manao teny fitsipahana ny hevitr' ireo mpanohitra sady manara-maso ny fanajan' ny mpino ny fitsipi-pinoana marina). Tsy manana andraikitra mitovy amin' ny an' ny mpitondra fivavahana anefa izy ireo satria tsy misy ny atao hoe mpitondra fivavahana ao amin' ny finoana bahay.
Ny "Tranon' ny Fahamarinana ho an' Izao Tontolo Izao" no fitondrana faratampon' ny finoana bahay ary ireo mpikambana sivy ao aminy dia fidin' ny mpikambana ao amin' ireo antenimieram-pirenena ara-panahy rehetra isaky ny dimy taona. Ny lehilahy feno 21 taona ihany no azo fidina ho mpikambana ao amin' ny Tranon' Izao Tontolo Izao ho an' ny Fahamarinana, nefa amin' ny finoana bahay ankehitriny (tsy araka ny zava-nisy tamin' ny fikambanana bahay tandrefana talohan' ny fiavian' i ʿAbd-al-Bahāʾ eo an-toerana sy hatramin' ny tenatenan' ny taonjato faha-20 teo amin' ny fikambanana bahay tany Atsinanana Afovoany) dia afaka fidina amin' ny toerana hafa rehetra na ny lehilahy na ny vehivavy.
Finoan' ny Bahay[hanova | hanova ny fango]
Mino an' Andriamanitra tokana sy mandrakizay izay mpamorona ny zavatra rehetra, isan' izany ny zavaboary sy ny hery eto amin' izao tontolo izao ny Bahay. Mino izy ireo fa tsy voafetran' ny fotoana sady tsy manam-piandohana sy fiafarana Andriamanitra. Amin' izy ireo dia "manan-tsitrapo manokana nefa tsy azo fantarina, tsy takatry ny saina, loharano nipoiran' ny fanambaràna rehetra, mandrakizay, mahalala ny zava-drehetra, manatrika amin' ny toerana rehetra ary mahefa ny zava-drehetra Andriamanitra". Na dia tsy takatra mivantana aza Andriamanitra dia mahazo an-tsaina ny zavatra noforoniny izy, ka sady manana tanjona no manana sitrapo. Mino ny Bahay fa manambara ny sitrapony amin' ny fomba maro Andriamanitra, ohatra amin' ny alalan' ny hafatra maro misesy atao hoe Fisehoan' Andriamanitra (maẓhar-i ilāhī) na indraindray atao hoe mpanabe araka an' Andriamanitra. Ireo fisehoan' Andriamanitra izay manambara ny fikendreny ireo dia ampiasaina hanorenana ny fivavahana eto amin' izao tontolo izao.
Milaza ny fampianarana bahay fa lehibe loatra Andriamanitra ka tsy mety ho azon' ny olombelona amin' ny alalan' ny sary feno sy mazava tsara. Ao amin' ny finoana bahay dia tondroina amin' ny fampiasana anaram-boninahitra Andriamanitra (ohatra: "ilay Mahery indrindra") ary maro ireo teny ananterana ny maha tokana azy.
Ny amin' ny fivavahana[hanova | hanova ny fango]
Azo fintinina amin' ny atao hoe "maha iray" telo ny finoana bahay, dia ny maha iray an'Andriamanitra, ny maha iray ny fivavahana ary ny maha iray ny olombelona.
↑ 16,0 16,1 et 16,2 Jean-Marc Lepain, Archéologie du royaume de Dieu : Ontologie des mondes divins dans les écrits de Bahá’u’lláh, Médiathèque bahá’íe, 2000 (tahiry)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahaisma&oldid=1043630"
Voaova farany tamin'ny 8 Febroary 2022 amin'ny 08:17 ity pejy ity.